mpamatsy bollard tarihin-tsolika - Mpanamboatra bollard any Shina
famolavolana maoderina namboarina vita amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny jiro any ivelany izay misy alàlan'ny jiro bollard
Ny vatan'ny jiro dia vita amin'ny fantsom-boaloboka vita amin'ny aliminioma sy fitaovana aluminium maty matanjaka be, ary ny etona dia elektrostatika manohitra fahanterana. Ilay fonony maivana mampita hazavana dia mandray fitaovana PC nafarana, anti-fahanterana ary anti-ultraviolet. Ny naoty fiarovana dia mety hahatratra IP65, izay ambony noho ny jiro nentim-paharazana. Ny loharanom-pahazavana dia miparitaka amin'ny manodidina, ny haingon-trano ary ny fampiharana azo antoka amin'ny bozaka, tsy vitan'ny fanatratrarana vokatra tsara tarehy fotsiny fa mba hitarika ny làlana koa. Ny fametrahana sy fanesorana dia mety, azo antoka ary sariaka amin'ny tontolo iainana.
Ny jiro LED Bollard ho an'ny Landscape Garden Yard Square Lighting any an-kalamanjana dia nitondra jiro ahitra
IP65 jiro ivelan'ny rano 25W mitarika jiro jiro bollard zaridaina
Ny vatan'ny jiro dia vita amin'ny fantsom-boaloboka alimina 6063 sy fitaovana aluminium maty matanjaka be, ary ny tampony dia esorina amin'ny alàlan'ny herinaratra anti-fahanterana. Ilay fonony maivana mampita hazavana dia mandray fitaovana PC nafarana, anti-fahanterana ary anti-ultraviolet. Ny naoty fiarovana dia mety hahatratra IP65, izay ambony noho ny jiro nentim-paharazana. Ny loharanom-pahazavana dia miparitaka amin'ny manodidina, ny haingon-trano ary ny fampiharana azo antoka amin'ny bozaka, tsy vitan'ny fanatratrarana vokatra tsara tarehy fotsiny fa mba hitarika ny làlana koa. Ny fametrahana sy fanesorana dia mety, azo antoka ary sariaka amin'ny tontolo iainana.